Enye yezincwadi zamasonto eMelika, kanye nemisebenzi kaFaulkner, uFitzgerald, uDreiser kanye ne "Kill the Mockingbird" nguHarper Lee. UBradbury wafinyelela phezulu kwamakhono akhe okubhala eminyakeni embalwa ngaphambi kuka-1957, lapho inkulumo ethi "Dandelion Wine" ibhalwa.
Isishwankathelo cishe yonke imisebenzi yomlobi sinikeza umfundi ukuba aqonde ukuthi phakathi nendawo yokubheka kwakhe kukhona imizwelo namaphupho afana nomuntu ngamunye. Ngakho-ke, ukuphenya umzabalazo phakathi kwemizamo yokubhujiswa kanye nendalo eyenziwa emphefumulweni womuntu ohlala eMhlabeni, umlobi wadala inkaba "451 degrees Fahrenheit", ezungeze inkundla, lapho idrama yamaqhawe idlala khona, indawo enhle kakhulu.
Ufuna ukuzamazama umfundi wakho, ukukhumbuza kuye izinkumbulo zobuntwana kanye nesikhathi lapho amaphupho angama-naive abonakala engokoqobo, wabhala uRay Bradbury, "iDandelion Wine." Okuqukethwe okufushane kwendaba kuzokuvumela ukuba ulungiselele umbono wezinhlawulo zawo zefilosofi kanye nokufanekisa okujulile okuphethwe kuwo.
Cishe bonke abalingiswa endabeni kaBradbury yizingane noma abantu asebekhulile. Kuyinto ukukhethwa kwe-alphagree yezinhlamvu ezenza umsebenzi uqondakale futhi ufinyeleleke kumfundi kunoma yimuphi ubudala: kusukela ebusheni kuya endala endala. Ngemuva kwalokho, emlonyeni wamaqhawe kukhona amagama afakiwe afaka imizwa yabantu eyaziwa kithi sonke kunoma iyiphi ingxenye yendlela yokuphila. Izenzo zabo inkosi yelizwi lakwazi ukuveza ngokucacile ukuthi akukho mcabango mayelana nokusetshenziswa okuhambisanayo.
Isakhiwo sitshela isikhathi esifushane, ama-protagonists amane asetshenzisene ndawonye - ihlobo elilodwa kusukela ebuntwaneni babo. Abazalwane ababili (uTom noDouglas) bangena ekushintsheni, bafunde ukuqonda ukuthi ukuphila nokufa ziphi, bazitholele obala izwe elingabantu abangaziwa. Umkhulu wabafana njalo ehlobo, ngokwesiko, alungiselela iwayini ekudleni. Isifinyeto sendaba ngeke siphelele, uma ungasho ukuthi igama lesi siphuzo sithathwe ngesihloko akusiyo ingozi. Ehlobo kanye, okugcwele okutholakala kanye nezenzakalo eziyingqayizivele, kuhlanganiswe kule vinini, elungiselelwe ngothando indoda endala ezivela ezimbali, eziyi-harbingers yale pore efudumele. Kubonakala sengathi yinto yokusebenza yemilingo, ikuvumela ukuba uthinte izinkumbulo, izikhathi ezidlule ezijabulisayo nabathandekayo abangasaphila.
Iwayini kusuka kuma-dandelions. Isifinyezo
Umsebenzi kaBradbury unamakhono amaningi. I-protagonist uDouglas igcina idayari ehlobo ka-1928, ayisebenzisayo egozwe abangane bakhe, izihlobo kanye nezakhamuzi zedolobhana laseGrentown - indawo encane, eluhlaza futhi enokuthula. Umlando uqhutshwa egameni lomuntu omdala ozama ukukhumbula izinkumbulo zakhe ekulawuleni iminyaka, impilo, ukufa, uthando ngisho nezinto ezinjalo ezingavamile njengobuthakathi.
Ama-motif amahle atholakala njalo endabeni. Isibonelo, uTom uhlale ehamba ngezindlela ezibonakalayo ezweni eliyimfihlakalo, eligcwele ubuhlungu nokugcwele izimfihlakalo. Umngane womfana, uLeo, "ungumshini wenjabulo" okufanele aphendule ikusasa lesintu. Kodwa ngokufanayo uzama ukuba ngumyeni oyisibonelo futhi angathukutheli umkakhe uLina, onombono oqondile kakhulu wezwe.
Ngolunye usuku, izingane zaso sonke inkampani zithunyelwa endlini yomninimzi, ngoba uMnu. Bathola ukuthi iwididi manje ishintsha umshini ohlinzeka ngamathikithi nokubikezela ngokushintshanisa ipenny. Labafana kufanele bahlole ukutholakala kweyunithi yemilingo baze bamnike impilo yesibili. Esikhundleni somshini wenhlanhla ufika umshini wesikhathi owenza izinto ezingqondweni zabafana abavela ezindabeni zakwa-colonel endala. Izinjabulo ezinjalo zezingane ezincane ziyingxenye yendaba ethi "Dandelion Wine".
URay Bradbury wadala izwe lemilingo ngempela. Futhi akukhathaleki ukuthi ohlelweni lwesibili lomlando, ukufa okungenakugwemeka kwamalungu asebekhulile omndeni ukuhlasela izimpilo zezingane. Ngempela, kungumlingo nokuhlanzeka komphefumulo ozobasiza ukuba banqobe usizi lokuqala. Ukuntuleka kwengqikithi elandelanayo kanye nesigcawu se-whimsical yezenzakalo kwanikela ngenhle yendaba emnandi "iDandelion Wine". Isifinyeto asikwazi ukuveza ngokugcwele umkhathi womsebenzi, kodwa uzokulungiselela ukufunda nokusiza ukugqamisa into esemqoka.
"Squirrel" - i-fable ka-Krylov: isakhiwo, ukuziphatha nesimanje
ULuka noSatan: yikuphi kubo okulungile?
Umsebenzi wezemfundo-omncane: ukwakheka njengendlela yokuziveza
India In the 60's G. Xix V.
IMHO Kuyini nalokho ibadla
"Car Loan" Uhlelo (Alfa Bank): yini noma cha ukuthatha?
On the ukulungiselela 'Odaban'. Ukubuyekeza, izinkomba, ukusetshenziswa
Sarcosome eyindilinga - a amakhowe ezingavamile engavamile
Arch Garden: okwenza izandla zabo
Inhloko-dolobha ye-Indonesia - Jakarta
Micro-USB: ububanzi nemibomo